वारेन्टी गाइड - जापान कैंची
यदि तपाईंको उत्पादनमा केहि गलत भयो जुन निर्माणसँग सम्बन्धित हुन सक्छ, वा तपाईं पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने, हामीलाई थाहा दिनुहोस्!
प्रत्येक जोडी ढुवानी गर्नु अघि सावधानीपूर्वक जाँच गरिन्छ, तर कहिलेकाहीँ चीजहरू गलत हुन्छन्। हामी तपाईंको समस्या समाधान गर्न के गर्न सक्छौं।
तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ मनको शान्ति तपाईका उत्पादनहरूमा उत्पादन दोषहरू कभर गर्ने वारेन्टी छ भन्ने थाहा पाउँदा।
यदि तपाईंले कुनै पनि निर्माण दोषहरू देख्नुभयो भने, तपाईंले हामीलाई व्यवस्थित गर्न सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ द्रुत समाधान.
हामीलाई ईमेल गर्नुहोस्: नमस्ते@japanscissors.com.au
हाम्रो वारेन्टी फारम यहाँ भर्नुहोस्: https://www.japanscissors.com.au/pages/order-returns-exchanges-form
वारेन्टी अवधिहरू ब्रान्ड र उत्पादनहरु को आधार मा फरक हुन सक्छ।
सबैभन्दा सामान्य समाधानहरू समावेश छन् प्रतिस्थापन, मर्मत वा फिर्ता.
हामी मर्मत वा प्रतिस्थापन व्यवस्थित गर्न निर्मातासँग काम गर्नेछौं।
यदि मर्मत वा प्रतिस्थापन सम्भव छैन भने, हामी तपाईंको उत्पादनको फिर्ताको व्यवस्था गर्न सक्छौं।
के समावेश नहुन सक्छ वारेन्टी मा जस्तै?
हामी बुझ्छौं कि त्यहाँ धेरै विभिन्न कैंची (वा अन्य उत्पादनहरू) छन्, र यो सही जोडी अनलाइन छनौट गर्न गाह्रो हुन सक्छ। यसैले हामी ए --दिन मन परिवर्तन फिर्ता जसले तपाइँलाई तपाइँको कातरहरू प्रयास गर्न अनुमति दिन्छ र यदि तपाइँ तिनीहरूसँग 100% खुसी हुनुहुन्न भने, तपाइँ तिनीहरूलाई फिर्ता वा विनिमयको लागि फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थप पढ्नुहोस्!
लागि तपाईंको वारेन्टी कभरेजमा पूर्ण जानकारी, कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस् वारेन्टी नीति यहाँ!
ब्रान्ड द्वारा वारेन्ट अवधि
जंटेत्सु कैंची: लाइफटाइम वारेन्टी
Ichiro कैंची: लाइफटाइम वारेन्टी
Mina कैंची: २ वर्षको वारेन्टी
Jaguar कैंची: अन्यथा निर्दिष्ट नभएसम्म 1 वर्ष वारेन्टी
Yasaka कैंची: अन्यथा निर्दिष्ट नभएसम्म १ वर्षको वारेन्टी
Kamisori भेडाहरू: अन्यथा निर्दिष्ट नभएसम्म १ वर्षको वारेन्टी
Feather रेजर्स: अन्यथा निर्दिष्ट नभएसम्म १ वर्षको वारेन्टी
अन्य उत्पादनहरु (जस्तै, कैंची, छुरा, कपाल काट्ने सामान, ब्लेड र कपाल कम्ब्स) बाट जापान कैंची: लाइफटाइम वारेन्टी
वारेन्टी दोष के हो?
यदि उत्पादनसँग केहि गलत भयो भने जुन निर्माणसँग सम्बन्धित हुन सक्छ, वा तपाइँ पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने हामीलाई भन्नुहोस्!
हेयरड्रेसिङ कैंचीमा वारेन्टी दोषहरू समावेश हुन सक्छन्:
तनाव प्रणाली काम गर्दैन
सफा गर्दा रङ कोटिंग फिक्का हुन्छ
कुंडा ह्यान्डल घुमाउँदैन
मुद्दाहरू जुन वारेन्टी दोष श्रेणी अन्तर्गत पर्दैन:
कैंची अब तिखो छैन
जंग वा खिया क्षति
शैली/प्रकारसँग १००% खुसी छैन
हामी उपभोक्ता कानूनको अनुसरण गर्दछौं जसले हामीलाई अनुमति दिन्छ परिभाषित गर्दछ मर्मत गर्नुहोस् वा सामान बदल्नुहोस् (वा उनीहरूको अंश)। यसले हामीलाई सकरात्मक ग्राहक अनुभव कायम गर्न र निश्चित गर्न निश्चित गर्दछ कि तपाईं विश्वासको साथ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ!
तपाईंको वारेन्टी कभरेजमा पूर्ण जानकारीको लागि, कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस् वारेन्टी नीति यहाँ!
सारा को एक नयाँ जोडी प्राप्त भएको छ Jaguar हिजो कैंची उनी उनीहरूलाई प्रयास गर्न गइन्, तर पेच खुल्ला छ र कडा पनि गर्न सक्दैन। यो मात्र शिथिल पार्छ र फेरि फर्केर जान्छ। उनी चिन्तित छिन् र जापान कैंची टोलीलाई ईमेल गर्छिन्।
उनले कैंचीलाई फेरि मूल बक्स र प्याकेजि back्गमा राख्छिन् र यसलाई फिर्ता दिएको ठेगानामा फिर्ता गर्छिन्। यी प्राप्त गरेपछि जापान कैंची टोलीले उनीहरूको निरीक्षण गर्दछ, समस्याको पुष्टि गर्दछ र कि त यसलाई तुरून्त समाधान गर्दछ वा अर्को जोडीलाई विस्थापनको रूपमा पठाउँदछ। सारा काम गरिरहेको जोडी पाउँदछ र कुनै पनि अधिक समस्या बिना काट्न सुरू गर्दछ।
यदि तपाईंसँग कैंचीको तीखोपनको साथ समस्याहरू छन् भने, तपाईं तिनीहरूलाई पहिलो7दिनमा फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ विनिमय वा प्रतिस्थापनको लागि। यस अवधि पछि, तपाईं ब्लेडहरू पूर्णतामा तीखो बनाउनको लागि आफ्नो क्यान्सर एक कैंची शार्पनरमा पठाउन सक्नुहुनेछ।